Uqinile u-Rabada futhi ulungele ukusebenza
Standard Bank Proteas fast bowler Kagiso Rabada
Ophosa ngokushesha kuma-Standard Bank Proteas, u-Kagiso Rabada, uthi ukuqinile futhi ulungele ukudlala ngaphambi kwe-Test yokuqala bedlala ne-Sri Lanka ezoqala e-Galle ngoLwesine. Lomdlali ongu-No.1 kuma-ICC Test rankings useluleme ngokuphelele emuva kokulimala iqolo ngo-April, futhi ulindele ukudlala emuva kokungadlali.
"Ngizizwa kahle, kulungile okwamanje," esho emuva kokuthi iqembu liqeqeshwe e-Galle ngoLwesibili. "Sadlala umdlalo wokulungiselela futhi wonke ama-seamers aphose ama-overs angu-12. Nami ngiphose isikhathi eside kuma-nets, ngaphinde ngaphosa namhlanje, ngakho konke kuhle. Ngijabulile ukuba lapha okwamanje."
"Ngicabanga kanjalo," ekhuluma ngokubuya okuyimpumelelo. "i-stress reaction ijwayelekile kubadlali abaphosayo, akumele kungibambezele."
Uhambo lokuqala lika-Rabada eya e-Sri Lanka futhi okwesibili kwi-sub-continent emuva kwe-tour yakhe yokuqala kwi-India ngo-2015. Wadlala imidlalo emithathu kwi-tour eyaphoxa, futhi nokho aqala kancane kumsebenzi wakhe wama-Test - wathola u-Virat Kohli njenge-wicket yakhe yokuqala kuma-Test - isipiliyoni sase-India simunike isithombe sokuthi kumele enze kanjani nenselelo yokuphosa kwi-sub-continent.
"Sidlala kwi-sub-continent ngakho kuzobanzima kuma-seamers," echaza. "Kunendima okumele ngiyidlale noma ikuphi engidlala khona emhlabeni. Indima okumele siyidlale lapha izohluka kunale esiyidlala ekhaya, ngizozama ukugcwalisa leyondima."
"Ayikho i-movement noma i-bounce eningi," ekhuluma ngezinselelo. "Kumele uthole ama-wicket akho ngenye indlela, futhi ngoba ingekho i-pace eningi, ama-wicket azobe engaphambi kwalo oshayayo, hayi emuva kwakhe."
u-Rabada uhamba phambili ekutholeni ama-wicket ku-2018, ethatha ama-wicket angu-38 nge-average engu-19.65. Waqeda ihlobo elihle ekhaya ngomdlalo we-player of the series bedlala ne-Australia (23 wickets nge-average engu-19) futhi wamenyezelwa njenge-SA Cricketer of the Year okwesibili. Nokho eqhubeka nokukhuphuka emhlabeni wekhilikithi, lomdlali oneminyaka engu-23 ugcina enomoya ophansi futhi enesizotha ngaphambi kwenselelo ekhulayo.
"Okwenzeka emuva kungakugqugquzela futhi kukunike ukukholwa okunezezekile," ekhuluma ngalokhu akuzuza kwi-season edlule "Ukuza lapha, isikhathi simanje, asikho emuva. Ngigxile kulokhu engakwenza manje kwi-series."
‘Positive’ cricket key to sub-continent success – Gibson u-Markram ujabulela inselelo yakwi-sub-continent u-Steyn ubuya kuma-Proteas; kufakwe ama-spinners amathathu kwi-tour yase-Sri Lanka u-Markram ujatshuliswa unyaka wokuqala enkundleni yezwe u-Rabada ubheka unyaka ohambe kahle u-AB de Villiers uthatha umhlalaphansi emuva komsebenzi weminyaka engu-14 kuma-Proteas i-CSA ne-CA bamemezela imidlalo yama-Proteas ngebhola elimhlophe behambele e-Australia i-CSA imemezelela imidlalo yasekhaya ye-season ka-2018/19 u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele